Yakanakisa chubhu echando michina muChina
Hapana mubvunzo kuti chubhu yechando muchina tekinoroji yakatanga kubva kuVogt USA, uye inogadzira yakanakisa chubhu echando michina. Kwenguva yakareba, Vogt inodzora musika weiyo yepamusoro tekinoroji. Iko kiyi yeiyo tekinoroji ndeye zvese zvemvura yekushandisa kudzora muhurongwa. Mushure mema disas ...
Kugara uchigadzirisa echando muchina
Chii chinofanirwa kutariswa mukuchengetwa kwemazuva ese kwemuchina wechando, uye zvinhu zvishanu zvinotevera zvinofanirwa kuitwa zvine hungwaru panguva yekushandisa: 1. Kana paine tsvina zhinji mumvura kana mhando yemvura yakaoma, ichasiya chikero pane evaporator chando-kugadzira tireyi kwenguva yakareba, uye t ...
Kushanda musimboti wechando muchina II
Ⅱ. Chimiro chechimiro Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzemvura, inogona kuganhurwa mumhando nhatu: rudzi rwekupfapfaidza, rudzi rwekunyudza uye mhando yemvura inomhanya. Maumbirwo emushini wesprayera unoratidzwa muMufananidzo 3. Iyo pombi yemvura inosasa mvura pamusoro peiyo evaporator yepamusoro, uye iyo evaporator chando tireyi ini ...
Kushanda musimboti wechando muchina 1
Ndeipi inoshanda musimboti yechando muchina? Zvinofungidzirwa kuti munhu wese haana kujairira dambudziko iri. Ichi chinyorwa chichatsanangura musimboti wekushanda uye kufambiswa kwemuchina muchina zvakadzama nemufananidzo wedhisheni. Ice mugadziri imhando yefiriji michina michina inotonhora mvura ...